Yintoni enxiba ijeyiti ye-denim?
Ijeyiti ye-denim ibilokhu ihlala yinto ethandekayo ye-wardrobe, kodwa okwethutyana ikhunjulwe, kodwa ngoku, iinyanga eziliqela ngokulandelelana, iphinda ithandwa. Kuphela kuwe kuxhomekeke kwindlela uza kujonga ngayo le jekethi: imfashini okanye imane nje ilungile! Kubaluleke kakhulu ngaphambi kokuthenga into yokugqoka ingubo yokugqoka ukucinga malunga nento edibanisa ngayo, kwaye yiziphi izambatho ongayenza ngokusekelwe kwisigqoko sakho sambatho.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba unokufumana iingubo kwiiqoqo ezikhethekileyo ezivela kubakhi befashini, ama-boutiques, kunye nezitolo zentando yesininzi epheleleyo, ngoko ke ziyafumaneka kuwo wonke umntu.
Ngoko, makhe sibone into yokugqoka ibhatyi ye-denim.
Ijekethi yeDenim ihambelana ngokufanelekileyo kunye ne-sarafans kunye neengubo zokugqoka iimpahla zendalo. Ubude obude buya kuba yi midi okanye i-maxi. Ukuba uthanda iingubo kunye nesinqe esiphezulu, uze ubeke i jeans ngaphezulu kwayo, uya kugxininisa ngempumelelo yonke imizimba yomzimba wakho.
Iidyayi ezimfutshane ezinjenge-denim zikhangeleka kakhulu ngeempawu zokukhanya ezigqithiseleyo ezide ngaphezu kwebhokisi. Kungcono ukuongeza imifanekiso yekotoni kunye ne-ballet. Iimfestile zincoma ukuba ungadingi kwifashoni yendoda: faka ijeketi ye-denim ngekhati ye-flannel ye-checkered shirt kwaye uya kujonga.
Ngenxa yobuchule kunye nokulula, ijeketi esuka ku-denimanovitsya ibaluleke kakhulu kwi-wardrobe yabaninzi abasetyhini befashoni. Kuyafaneleka ngokufanelekileyo ukubheka kokubili eofisini kunye nokuhamba ngothando, kokubili kwi-disco nakwiintlanganiso.
Ukuba ukhetha ukugqithisa, ngoko ke kukufanelekile ukunika ukhetho kwimiqulu yoyilo, engekona ngokupheleleyo kwindalo yesithethe. Abathengisi abazange bahluleke ukuphawula ukuba ezi zijekethi azifanelekanga kwiisokisi zemihla ngemihla kwaye zifanele kuphela iintlanganiso ezingaqhelekanga.
Ukukhetha ibhatyi kwi-denim kwisitayela se "kizhual" qaphela, kufuneka ihambisane nawe ngobukhulu, ngoko into iya kulungelelanisa kwisigqoko sakho sambatho. Kwakhona kubalulekile ukuqwalasela zonke iimpawu zomfanekiso. Ukuba unobunzima obunzima, i-jeans kufuneka ifakwe, umnini wesifuba esikhulu kufuneka aphephe iipokotshi ezingaphezulu kweli ndawo.
Kwiminyaka yakutshanje, i-jeans ikhutshwe kwisitayela esithandwayo "semikhosi" kunye nakwii-shelves ezininzi zeevenkile zidibana nazo ngokufanayo. Ngokuqhelekileyo bawahlobisa ngeentambo, iidvethi kunye neepaulettes. Ezi jekethi zibhalwe kakuhle kwiigrafti ezide, amantombazana anamhlanje.
Ukuhamba, isaphetha esilula esilula, esine-elk elastic, i-tanic elula, ubude obude, izicathulo kwisithende kunye nejacket ephathekayo, iphelele.
Intlangano enhle kakhulu iya kuba yingubo emhlophe emhlophe eyenziwe ngezinto eziphathekayo ezizaliswe ngengubo ebomvu. Ukuba isitrato ishushu, musa ukukhawuleza ukukususa, vele uqoke iimpahla zakho kwaye uza kujonga kakhulu.
Eyona nto ifanelekileyo i-jeans efanelekileyo kwiintambo, i-blouse emhlophe igxilile kunye ne-bolt. Intlangano efanelekileyo, phawula abaniki bamagama, yipakethi ye-tandem eneengubo ezilula kunye nezicathulo.
Qinisekisa ukuba uncedise imifanekiso yakho kunye nezixhobo: iinqanawa, iintambo zentamo, iinkhwa ezincinci ezithatha ixesha elide, izikhwama, amabhande. Zonke ezi zinto zigxininisa ngokugqithiseleyo isitayela sakho kwaye uya kukwazi ukuzityhila.
Kufuneka ukuba uqaphele ukuba kulo nyaka abenzi be-stylists abacebisi ukudibanisa ijeyiti zeedimethi kunye neebhulukhwe, iipketi kunye neendwanguzo ezenziwe kwindwangu efanayo.
Isikhokelo sokuthengisa: I-TOP-3 izitolo ze-intanethi kunye namaxabiso amnandi ehlobo
Ingubo yokugqoka imantombazana epheleleyo: oko ukhetha
Ukugqithisa okufudumeleyo: zeziphi ii-overalls zokuzikhethela abantwana?
Ukuthenga 2017: Ziziphi izinto eziza kuhlala zifestile kwixesha elithile
Indlela yokwenza umlenze wokunyakaza: ubuchule, ividiyo
Ikhefu "i-Anthill". I-Classic kunye nezinye zokupheka ezihamba phambili
Indlela yokukhetha iheyti elungileyo
Izimonyo ze-Hardware: ipololysis
Iibhanki zesiTshayina ngelayisi edikiweyo
Umdaniso weBachata - udibaniso lwesimo sengqondo kunye ne-magnetism
Ngubani ofuna iimfuno ezisuka kwisitolo sezesondo?
IHososcope yeCanscer-Abasetyhini ngoJanuwari 2017
Scorpio: i-horoscope ekwindla ka-2013
Iingcebiso zomyili: indlela yokukhetha umbala wegumbi - iphepha lodonga
I-pie evuliwe isanti kunye ne-cowberry
I-Veal Heart kunye neMifuno
Iengqondo zezingane kwi-kindergarten